The Truth About Graduation
Isu Ayatullah: Kita Harap Dr.Asri Tidak Bertapi-tapi Untuk Sertai Wacana Jemputan PAS
Rakhine Criminal MP Dr Aye Mg’s interview with BBC
This letter could beastrong evidence at ICC to prosecute U Wira Thu and his political masters
Muka MCA Labuh, Nik Aziz Kata Tutup Aurat Untuk Orang Islam!
ဂုဏ်ယူလိုက်ပါ…. အို မွတ်စလင် (၁)
ကျောက်ဖြူတွင် အကြမ်းဖက် တိုက်ခိုက်ခံရသူများမှာ ကမန်မွတ်စလင် အများစုဖြစ် (RFA သတင်း/အင်တာဗျူး)
သင်္ဃန်းကျွန်းမှ မွတ်စလင်ရပ်ကွက်များအား မီးကွင်းပစ်မည်ဟု ခြိမ်းခြောက်ခံရ
၆ ရက်ကြာအကြမ်းဖက်မှုများ၊ ကျည်ဆံနှင့် မီးတောက်များကြားမှ မွတ်စလင်များရဲ့ အသံ
Muslims in Yangon’s Thin Gan Gyune Threatened With Arson Attacks
Petani Dari Tiga Bangsa, Melayu Cina Dan India Buat Laporan Polis Terhadap Noh Omar
Unrigging an Election
A myanmar-gyi family was attacked by rakhine terroist in arkhan state- part4
ကုလားမဟုတ်ပါဘူး နီပေါလူမျိုးပါလို့ ဆိုထားတဲ့ အဆိုကို ပြန်လည်ရှင်းပြ
ဥပဒေ အရ ဆိုရင် ဒီလို ဘုန်းကြီးတွေကို နိုင်ငံတော် ပုန်ကန် မှုနဲ့ တကျွန်း ပြစ်ဒဏ်ချလို့ရနေပြီ
Kuching – Day 1 Part2of 2: October 21, 2012
ဒီလို ဘုန်းကြီးတွေကို ကို နိုင်ငံတော် ပုန်ကန် မှုနဲ့ တကျွန်း ပြစ်ဒဏ်ချလို့ရနေပြီ
Posted: 29 Oct 2012 09:28 AM PDT
Imagine what would happen one day if some graduands had the courage to tell the truth when giving their graduation speeches...
That's technology for you. The question that remains is...has it made us smarter or what?
Posted: 29 Oct 2012 10:13 AM PDT
Asri dijemput berwacana bersama Ulamak PAS
KUALA LUMPUR: Dewan Ulamak PAS Pusat menjemput Datuk Dr Mohd Asri Zainul Abidin untuk menyampaikan pandangan dan kritikannya kepada dewan itu dalam wacana ilmu bersama ahli-ahli Dewan Ulamak.
"Saya merujuk kepada kebimbangan Datuk Dr Mohd Asri Zainul Abidin bahawa ulama-ulama dalam PAS dibimbangi tidak boleh ditegur apabila memerintah kerajaan pusat nanti dalam satu wacana baru- baru ini," kata setiausahanya, Dr Mohd Khairuddin A. Razali kepada Harakahdaily.
Menurutnya, oleh kerana kebimbangan tersebut dilontarkan dalam wacana awam yang disiarkan isinya dalam media perdana dan mendapat respons umum pula, maka sayugia Dewan Ulamak PAS Pusat menyatakan pandangan balas terhadap kenyataan tersebut.
Jelasnya, Dewan Ulamak PAS Pusat sentiasa berlapang dada dengan sebarang pandangan, teguran dan kritikan luar terhadap apa jua tindakan yang diputuskan secara jamaei dan pandangan yang dilontarkan oleh Dewan Ulamak dengan merujuk kepada al-Quran, al-Hadis, Ijma dan Qias di samping pandangan dan ulasan ulamak-ulamak muktabar sepanjang zaman.
Hal ini, katanya sesuai dengan akhlak Islam yang menganjurkan konsep nasihat-menasihati dan arahan agar berbincang sesama muslim, antaranya Alllah berfirman yang bermaksud: "Demi masa. Sesungguhnya manusia pasti dalam kerugian melainkan orang yang beriman, beramal soleh dan berpesan-pesan dengan kebenaran dan berpesan-pesan dengan kesabaran".(Surah Al-Asr)
Selain itu, katanya Dewan Ulamak PAS Pusat berbesar hati menjemput Dr Asri untuk menyampaikan pandangan dan kritikan beliau terhadap Dewan Ulamak PAS Pusat dalam wacana ilmu bersama ahli-ahli Dewan Ulamak sebagai satu medan perbincangan dan bertukar-tukar pandangan.
Tambahnya, tarikh wacana boleh diberikan berdasarkan kelapangan masa Dr Asri.
"Saya akan berhubung dengan Dr Asri secara personal untuk urusan lanjut wacana tersebut.
Semoga dengan itu kita boleh terus membudayakan akhlak berbincang dan bertukar-tukar pandangan seperti dianjurkan oleh Islam," ujarnya.
Demikianlah. Kita berharap tiada banyak alasan dan tepisan untuk Dr.Asri menerima jemputan PAS untuk berwacana.
Berani cakap beranilah tanggung. Kita berhujjah bersama-sama. Bukankah Islam dan kebenaran itu tertegak dengan hujjah?
Posted: 29 Oct 2012 05:28 AM PDT
I guess it had to happen: me succumbing toabig influenza attack again. I'm always susceptible to colds and influenza and every time it happens, usually I would end up with irritating phlegm in my throat. Once the initial flu attack ends, my phlegm would thicken until it starts off bouts of coughing fits and I'm put onasecond round of antibiotics.
But today, for only the second time in my life, I lost my voice as well. Haven't been able to speak aboveawhisper. So I haven't been very communicative at all, save for text messages.
I had taken an anti-influenza injection before but it was so long ago. The jab quite effective and foralong while, I didn't have to endure the misery ofaflu attack. At that time, the doctor had told me that the protection couldn't last forever. She said that because of new strains of the influenza virus appearing, it would be necessary to take the injection onceayear. But I had been holding off partly due to procrastination and partly due to wanting to find out how long I could go before having another injection.
Well, I guess with today's brush with influenza, it is about time that I seriously think about getting another anti-influenza jab again.
I had to search through my archives on this blog to find out when exactly I had the first injection. Took me quiteawhile to go through the archives but I finally uncovered an entry dated in May 2008. Wow, that would be almost 4½ years ago. The protection had lasted so long. It was well worth the RM60 paid for me to remain relatively influenza-free all this time.
Let me recover from this latest bout and I'll definitely go and get covered again...
Posted: 29 Oct 2012 07:17 AM PDT
ဒေါက်တာအေးမောင်ကို BBCကရခိုင်ပြည်နယ် လက်ရှိအခြေအနေနဲ့ ဆက်သွယ်မေးမြန်းချက်
ဒေါက်တာအေးမောင်။ ။သမ္မတကြီးကလည်းပြောတယ်လေတည်ငြိမ်အေးချမ်းဖို့အတွက် ၀ိုင်းဝန်း ကူညီကြပါ။ သူဆယ်ခွန်းပြောတာနဲ့စာရင်တိုင်းရင်းသားရခိုင်ပါတီဘက်ကတစ်ခွန်းပြောတာ
အဆင်ပြေပါတယ်။ အဲဒီကတည်းကကျွန်တော်တို့ က အစိုးရအဖွဲ့နဲ့ ပေါင်းပြီး တတ်နိုင်သလောက်အကူအညီပေးကြတာဗျ။အခုလည်းပူပေါင်းဆောင်ရွက်ပေးနေပါတယ်။
မေး ။ ။ဘီဘီစီ…
အတွက် ဆရာတို့ အနေနဲ့
ဖြေ ။ ။ ဒေါက်တာအေးမောင်။
နော် ခုနလို community
ဖြေ။ ။ ဒေါက်တာအေးမောင် ။
Posted: 29 Oct 2012 07:08 AM PDT
Human Rights ignorant Myanmar monk stupidly published this self incriminating evidence on his FB wall.
This fake monk agent provocateur Wira Thu and the Myanmar Government including local Mandalay Division Government must be called to ICC for the CRIMES AGAINST HUMANITY for not taking action on Wira Thu.
..27.10.2012- နေ့တွင် "ချမ်းမြသာစည်မှာ ဖြန့်ဝေသောစာ"
ရခိုင်မှာ – လူမျိုးရေးပြဿနာတွေဖြစ်နေတယ်၊ သတိနဲ့ နေတော်မူကြပါဘုရား။
မွတ်ဆလင်ကိုမုန်းရင် မွတ်ဆလင်စီးပွါးရေးကို အာမပေးပါနဲ့ဘုရား…
ဥပမာ= GI- group . JJ- group စသည့်ရန်ကုန်-မန္တလေးကားလမ်းအသင်းတွေပါဘုရား ကျန်တဲ့ကားအသင်းတွေလည်း ရှိပါသေးတယ်ဘုရား၊
မွတ်ဆလင်အရေးနှင့် ပတ်သက်လာလျှင် ဦးဝီရသူကို (မစိုးရိမ်) ကိုပဲအားမကိုးပါနဲ့ဘုရား။
နောက်မှ ဆက်လက် အသိပေးပါမည်ဘုရား။
ကိုယ့်စည်းကို လှုံအောင်ကာကြပါ ဒို့ဗမာ။
အ .. ပဲ .. အ .. လွန်းသည်
ရွှေကိုပေးသည်၊ ငွေကိုပေးသည်၊ မြေကိုပေးသည်၊ ပြီးတော့
အရင်ကလည်း ပေးခဲ့သည်၊ အခုလည်းပေးနေကြသည်၊
အ .. ပဲ .. အ .. လွန်းသည် န .. န .. လွန်းသည်၊
ယခုထိအောင် သတိမဆောင် မသိယောင်နေကြသည်
အမျိုးပျက် ဘာသာပျက်လို့ ရတက်ပွေလီ
အမိမြန်မာပြည် ဘုရားဖက်မှ အသက်ရှည်တော့မည်။
အထက်ပါစာကို မန္တလေးမြို့၊ နေရာအနှံ့အပြားမှာ ကပ်ကြဖြန့်ကြကြောင်းသိရပါသည်။
"ဦးဝီရသူ(မစိုးရိမ်)ကိုပဲ အားမကိုးပါနဲ့ဘုရား"ဟူသော စကားကို ကြိုဆိုပါသည်။ မိမိသည် ၂၀၀၃-ခုနှစ်ကတည်းက မိမိ၏ သရဖူကို အလဲထိုးအနိုင်ယူဖို့ ဖိတ်မန္တကပြုခဲ့ဖူးပါသည်။ ထို့ကြောင့် မိမိထက်သာလွန်သော၊ မိမိနှင့် မတူတမူထူးခြားသော အတွေးအခေါ်အမြော်အမြင် နည်းသစ်စနစ်သစ်တို့ဖြင့် အမျိုးဘာသာသာသနာအရေး ဆောင်ရွက်မည့် မည်သည့်ပုဂ္ဂိုလ်/ အဖွဲ့စည်းကို မဆို အားကူညီထောက်ပံ့ လှူဒါန်းသွားမည်ဖြစ်ပါသည်။
"တရားသူကြီးသဖွယ်လုပ်နေပါတယ် ဘုရား"ဟူသော စကားကိုလည်း ဝန်ခံပါသည်။
"သူနားမလည်တာတွေ အများကြီးပါဘုရား"ဟူသော စကားကိုလည်း လက်ခံပါသည်။
"နောက်မှ ဆက်လက်အသိပေးပါမည်ဘုရား"ဟူသော စကားအရ နောက်ဆက်တွဲ အသိပေးချက်များ ကိုလည်း မျှော်လင့်နေပါသည်။
"ဝီရသူကို မလုပ်ကြံပါနှင့်"ဟူ၍ ဖြစ်ပါသည်။
Posted: 29 Oct 2012 08:02 AM PDT
KOTA BHARU: "Saya sebut tutup aurat untuk orang Islam tidak kepada bukan Islam.
Kalau tak tutup aurat "padanlah" kalau kena rogol pun.
"Tapi oleh sebab dia pandang serong awal-awal lagi kepada Islam, maka dia beremosi. Ini sesuailah dengan Umno yang juga pandang serong terhadap Islam," kata Tuan Guru Datuk Nik Aziz Nik Mat.
Mursyidul Am PAS berkata, tohmahan yang dilempar MCA terhadapnya jelas sangat beremosi dan menampakkan pandangan serong mereka terhadap Islam.
Ia juga sama dengan Umno yang memandang serong Islam, bahkan menolak Islam dalam dasar perjuangan partinya.
Beliau ditemui pada rumah terbuka sempena Aidiladha di kediamannya di Pulau Melaka semalam.
Pada majlis itu Menteri Besar mengorbankan tiga lembu dan dagingnya diagih kepada penduduk kampung.
Baru-baru ini Pengerusi Wanita MCA, Heng Seah Kie dilaporkan mendakwa Tuan Guru Nik Aziz membenarkan wanita bukan Islam dirogol sekiranya tidak mematuhi kod etika pakaian Islam.
"Apabila Umno tolak Islam, takkan pula MCA nak bantu Islam. Dengan automatik parti itu akan buat perkara-perkara yang melemahkan Islam.
"Jadi mereka tidak layak memimpin negara.
Negara barat marah kepada Islam, Umno pun begitu juga. Jadi apa beza Umno dengan pandangan barat," ujarnya.
Sementara itu ditanya sama ada beliau akan bertanding lagi pada pilihan raya umum ke-13 nanti, katanya ia terletak kepada keputusan parti dan dirinya sendiri.
"Kalau saya rasa boleh bertanding, saya bertanding, namun kena dengar dahulu keputusan parti.
"Apabila parti buat keputusan bertanding maka bertandinglah kecuali saya kata tak boleh bertanding lagi kerana masalah kesihatan atau sebagainya.
"Tetapi selagi saya berasa masih boleh bertanding dan parti pun setuju maka saya bertandinglah," katanya.
Menurutnya tidak ada had umur dalam perjuangan gerakan Islam kerana penamatnya ialah mati.
Mengenai calon dalam PRU-13, beliau berkata, PAS akan bertindak secara rapi dan berhati-hati berdasar kepada pengalaman lalu.
Ini kerana menurutnya negara ini bukan demokrasi sebenar sebaliknya hanya demokrasi buat-buatan sahaja.
"Kami tidak diberi lesen mengendalikan radio, surat khabar harian pun tak diluluskan permit, demikian juga dengan televisyen.
"Akses media sangat tidak adil. Ini kerana mereka tahu perjalanan gerakan Islam adalah pada landasan yang betul.
"Apabila diberi peluang mendapat tempat dalam suratkhabar menyebabkan rakyat sedar dan menolak fahaman kebangsaan.
Namun mereka sekat supaya rakyat terus jadi bodoh," kata beliau. -HD
Posted: 29 Oct 2012 06:30 AM PDT
Sitting U.S. President Ford was visiting San Francisco in 1975 whenawoman attempted to shoot him. A former marine named Oliver Sipple grabbed the gun, preventing the assassination attempt. When the press began contacting him, he asked that his sexuality not be discussed. While Sipple was very active in the gay men's scene in the Castro, he was not out to family or work. But Harvey Milk,afamous gay rights activist, chose to out him so the public could see that gay men could be heroes, too.
The cost to Sipple was devastating. The White House distanced itself from him, his family rejected him, and he sunk intoadark depression. He gained massive amounts of weight, began drinking profusely, and died at the age of ripe young age of 47. Many around Sipple reported that he regretted his act of heroism and the attention resulting from it. But for Harvey Milk, the potential social good from using Sipple's story far outweighed what he perceived as the costs of outing him.
This isahard moral conundrum, in part because Sipple was clearlya"good" guy who had doneagood deed. But what if he wasn't? What are the moral and ethical costs of outing people and focusing unwanted attention on them?
Dr. danah boyd isaSenior Researcher at Microsoft Research;aResearch Assistant Professor in Media, Culture, and Communication at New York University; andaFellow of Harvard's Berkman Center for Internet & Society. She is currently working onabook that untangles myths about young people and social media.
Two weeks ago, Gawker journalist Adrian Chen decided to unmask the infamous Reddit troll "Violentacrez" as Michael Brutsch. When Chen contacted him, Brutsch did not attempt to deny the things he had done. He simply begged Chen not to publish his name, citing the costs that publicity would have on his disabled wife. Chen chose to publish the piece – including Brutsch's pleas and promises to do anything that Chen asked in return for not ruining his life. As expected, Brutsch lost his job and the health insurance that paid for his wife's care; Chen reported this outcome three days later. Many celebrated this public shaming, ecstatic to seeanotorious troll grovel.
Although none of his actions appeared to be illegal, it's hard to call Brutscha"good" guy. He had created settings where people could share deeply disturbing content. He enticed people to reveal their ugliest sides. In many ways, Brutsch wasaclassic troll, abusing technology and manipulating the boundaries of free speech to provoke systematic prejudices and harassment for his own entertainment. He got joy from making others miserable.
Unmasking asaWay to Regulate Social Norms
There are many different reasons to unmask people, out them, or make them much more visible than they previously were. Sometimes, the goal is to celebrate someone's goodness. At other times, people are made visible to use them as an example … or to set an example. People are outed to reveal hypocrisy and their practices are made visible to shame them.
In identifying Butsch and shiningaspotlight on his insidious practices, Chen's article condemns Butsch's choice of using the mask of pseudonymity to hide behind actions that have societal consequences. Public shaming is one way in which social norms are regulated. Another is censorship, as evidenced by the Reddit community's response to Gawker.
Yet, how do we asasociety weigh the moral costs of shiningaspotlight on someone, however "bad" their actions are? What happens when, asaresult of social media, vigilantism takes onanew form? How do we guarantee justice and punishment that fits the crime when we can use visibility asatool for massive public shaming? Is it alwaysagood idea to regulate what different arbiters consider bad behavior through increasing someone's notoriety – or censoring their links?
As the Gawker/Reddit story was unfolding, another seemingly disconnected case was playing out. Inatown outside of Vancouver,ayoung woman named Amanda Todd committed suicideafew weeks after postingaharrowing YouTube video describing an anonymous stalker she felt ruined her life. The amorphous hacktivist collective known as "Anonymous" decided to makeaspectacle of the situation by publishing personally identifiable information on – "doxxing" – Todd's stalker. They identifieda32-year-old man, enabling outraged people to harass him. Yet it appears they got the wrong person. Earlier this week, Canadian police reported that Todd's stalker was someone else: reportedlya19-year-old.
Posted: 29 Oct 2012 05:25 AM PDT
ကချင်၊ ကယား၊ ကရင် ၊ ချင်း ၊ ဗမာ ၊ ရခိုင် ရှမ်း စတဲ့ တိုင်းရင်း သား ထဲက တိုင်းရင်းသား မွတ်စလင်တွေ ၊ အိန္ဒိယနွယ်ဖွား မွတ်စလင်တွေ ၊ တိုင်းရင်းသားအဖြစ်မှ ဖယ်ထုတ် ခံရတဲ့ ရိုဟင်ဂျာတွေ ၊ ပသီ လို့ခေါ်တဲ့ မြန်မာမွတ်စလင် တွေ ၊ အဖယ်ထုတ်မခံရသေးတဲ့ ကမာန် တိုင်းရင်းသား တွေ အားလုံးအားလုံး မွတ်စလင်တွေဟာ မြန်မာ့သမိုင်းတွင် မကြုံစဖူး မဖြစ်စဖူး ခက်ခဲတဲ့ အခြေအနေနဲ့ ရင်ဆိုင်နေရပါပြီ။
တမြေတည်းနေခဲ့ကြတဲ့ မွတ်စလင် မဟုတ်သူ အစွန်းရောက် တစ်စုဟာ သူတို့နဲ့ အယူဝါဒ မတူကြ တဲ့ တမြေတည်းနေ ဌာနေ မွတ်စလင်တွေ အပေါ် မှားယွင်းတဲ့ သတင်းအချက် အလက်တွေ ကနေ အခြေခံတဲ့ ဆုံးဖြတ်ချက်အမှားတွေ အခြေခံပြီး ပြင်ရခက် ၊ ဖျက်ရခက်တဲ့ လုပ်ရပ်အမှား တွေဆက် တိုက်ကို ကျူးလွန် လာကြတော့ပါတယ်။
ကိုးကွယ်ရာအရှင် အလ္လဟ်အရှင်မြတ် ကို တိုက်ခိုက်စော်ကားတာ၊ ကအစ ၊ ကုရ်အာန် ကျမ်းမြတ် ကို ရှုတ်ချ ပြောဆို၊ အစ္စလာမ် ဘသာကိုးကွယ်သူ တွေရဲ့အသက်အိုးအိမ် စည်းစိမ်တွေ တိုက် ခိုက် ဖျက်ဆီး၊ ဇာတိချက် ကြွေ ကနေ မောင်းထုတ် စတဲ့ လုပ်ရပ်ဆိုးတွေကို တရား ဥပဒေ ဘောင် တွင်း လုပ်ရပ် သဖွယ်ပြောင် ပြောင် တင်းတင်းကို လုပ်နေတော့တာပါပဲ။ ဒီလို ကျူးလွန်တာကို မျိုးချစ် စိတ်ဓါတ် အမည်တပ် သူကတပ်ပေး ၊ သာ သနာ တော်ကာ ကွယ်ရေး လို့ ခေါင်းစီး တင်ပေးသူ ကပေး နဲ့။
ဘာသာရေးအညှာကိုင်ပြီး စိတ်ထားဖြူစင်ကြတဲ့ ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်တွေကို အမုန်းဇတ် သွင်း ပါတော့ တယ်။
ဒီလိုသာဆိုရင် ဟစ်တလာ ၊ တို့၊ ဂျပန် ဖက်စစ် တို့တတွေလဲ မျိုးချစ်ကြီး တွေ၊ သာသနာတော် ကာ ကွယ်သူတွေ ဖြစ်ကုန်ပြီ ပေါ့။
ဒါပေမယ့် သမိုင်းနဲ့ချီ ပြီး အဖိနှိပ်ခံနေရတဲ့ ။ ခွဲခြားဆက်ဆံခံနေရတဲ့ မွတ်စလင်တွေကတော့ အဆုံးရှုံးခံ အခွင့်အရေးတွေကို ရရှိဖို့
ခွဲထွက်ရေး ခြေလှမ်း မလှမ်းခဲ့ပါဘူး။
ရှင်းရှင်းထပ်ပြောရရင် အစ္စလာမ် အမည် မွတ်စလင်အမည်ခံနဲ့ လက်နက်ကိုင် အဖွဲ့အစည်း အမိမြေမှာ မရှိပါဘူး။
ဒါတွေဟာ မြန်မာပြည်က မွတ်စလင်တွေရဲ့ သမိုင်းမှတ်တိုင်ကြီးတွေပါ။
မွတ်စလင်တွေဟာ အယူမတူအစွန်းရောက် တချို့ရဲ့ ကမ္ဘာသိ ဖိနှိပ် ရက်စက်မှုတွေ ၊ ခွဲခြား ဆက်ဆံ မှု တွေကို ဘယ်လို ရင်ဆိုင်နေကြလဲ ဆိုတာ စိတ်ဝင်စားစရာပါ။
(၁) အယူမတူအချို့ အလ္လဟ်အရှင်မြတ်ကို စော်ကာကြပေမယ့် အခြား ကိုးကွယ်ရာတွေကို တိုက်ခိုက်ပြစ် တင်တာ တွေ မွတ်စလင် တို့ မလုပ်ကြပါဘူး။
ဘာလို့လဲ ဆိုတော့ ကုရ်အာန်ကျမ်းစာက ဒီလိုသွန်သင်ထားလို့ပါပဲ။
အသင်တို့သည် အကြင် ကိုးကွယ်ရာများကို ကဲ့ရဲ့ရှုတ်ချခြင်း မပြုကြလင့်။ ၆း၁၀၈
(၂) အယူမတူတွေက သတင်းမှား တွေကို နားယောင်ပြီး ဇာတိချက်ကြွေ မွေးရပ်မြေကနေ မွတ်စလင်တွေကို မောင်းထုတ်နေပါတယ်။ ဒါပေမယ့် ကုရ်အာန်ကျမ်းမြတ်ကိုလက်ခံကျင့်သုံးသူ မွတ်စလင်တွေကတော့အယူမ တူတွေ ဒုက္ခတစ်ခုခုခံစားရလို့ ခိုလှုံခွင့်တောင်လာခဲ့ရင် ဘယ်လိုတုန့်ပြန်ရမလဲဆိုတာ ဒီလိုဖော်ပြထားပါတယ်။
…မွတ်ရ်ှရစ်က်တို့အနက်မှ တစ်ဦးတစ်ယောက် သောသူသည် အသင့်ထံတွင် အကာ အကွယ်ရလိုခဲ့ပါလျှင် အသင်သည်ထိုသူအား ၎င်းသည် အလ္လာဟ် အရှင်မြတ်၏ အာယတ်တော် ကိုကြားနာနိုင်အံ့သောငှာ ကာကွယ်ပါလေ၊) ထို့နောက် အသင်သည် ထို သူ့ အား ၎င်း၏ဘေးရန်ကင်းငြိမ်းရာဌာနသို့ ပို့ဆောင်၍ပေးပါလေ။ ဤ(အမိန့်တော် ကို ထုတ်ပြန်တော်မူခြင်း)ကား ၎င်းတို့သည် မသိနားမလည်သော သူ များ ဖြစ် ကြ သောကြောင့် ပင်တည်း။ ၉း၆
(၃) မွတ်စလင်များကို တိုက်ခိုက်ရေးသားထားတဲ့ မဟုတ်မမှန် ၀ါဒဖြန့် တာတွေ က ဖေ့ဘွတ် အင်တာနက်မှ ရန်ကုန်မြို့လယ်ကောင် ၊ မြန်မာနိုင်ငံအနှံကို သတင်း မှားတွေ ဖြန့် ချီ နေပါတယ်။
အယူမတူ အစွန်းရောက်တစ်ချို့က ဒီလိုတွေလုပ်နေပေမယ့်လည်း အစ္စလာမ်ဘာသာဝင်တွေ ကတော့ ကျမ်းမြတ်ကုရ်အာန်က သင်တဲ့နည်းနဲ့ပဲ တုန့်ပြန်နေပါတယ်။
အသင်သည် ထိုသူတို့၏ပြောဆိုဝါဒဖြန့်ချိမှု နှင့် စပ်လျှဉ်၍ ဆွဘရ် ကြံကြံခံ ရပ်တည်မှု ကို ပြုပါ။ ၄င်းပြင် ကောင်းမွန်လှပစွာဖြင့် ထိုသူတို့နှင့် လွတ်ကင်းအောင် နေထိုင်ပါ။ (၇၃း၁၀)
(၄) ၀ါဒဖြန့်ချီရေးမီဒီယာတွေကြောင့် အမုန်းပင်လယ်ထဲမျောနေကြရတဲ့ တမြေတည်းနေ တစ်ခရီးထဲသွားကြသူတွေ သတင်းမှန်ကြားရအောင် ၊မွတ်စလင်တို့က ကောင်းမှုလှပစွာ ချိုသာ နူးညံ့စွာ တင်ပြနေကြပါတယ်။
အကြောင်းကတော့ အလ္လဟ်အရှင်မြတ်က ဒီလို သွန်သင်ထားလို့ပါ။
လူသားတို့ကို ခက်ထန်သော အပြုအမူဖြင့် မဆက်ဆံကြပါနှင့် …(၃၁း၁၈)
..အသင်တို့သည် မကောင်းမှုကို ကောင်းမှုဖြင့် တွန်းလှန်လျှင် အသင်တို့နှင့် သူတို့ စပ်ကြား ရန်ငြိုး သည်ပျောက်ပျက်ကာ ထိုသူတို့သည် မိတ်ဆွေရင်းကဲ့ သို့ ဖြစ်လာမည်။ ( ၄၁း၃၄)
အယူမတူသူ တစ်ချိ့ က မဟာဗျူဟာ နည်းဗျူဟာ အစုံနဲ့ တိုက်ခိုက် လာတာကို မွတ်စလင်တုိ့က ဒီတန်ဖိုး တွေကို အခြေခံပြီး တုန့်ပြန်နေတာပါ။ ရင်ဆိုင်နေတာပါ။
အစ္စလာမ့်လမ်းစဉ်ပေါ်မှာ မားမားရပ် နေရတဲ့ အတွက် ဂုဏ်ယူလိုက်ပါ အို-မွတ်စလင်
မုဟမ္မဒ် စအီးဒ် (အီမာမသ် ၊ဒအ်ဝဟ် အကယ်ဒမီ ၊ ပါကစ္စတန်)
Posted: 29 Oct 2012 05:14 AM PDT
ကျောက်ဖြူတွင် အကြမ်းဖက် တိုက်ခိုက်ခံရသူများမှာ ကမန်မွတ်စလင် အများစုဖြစ် (RFA သတင်း/အင်တာဗျူး) Listen to original Voice File at M Media.
ပြီးခဲ့တဲ့ အောက်တိုဘာလ ၂၃ရက် ညဘက် ၈း၀၀ နာရီဝန်းကျင်လောက်နှင့် အောက်တိုဘာလ ၂၄ရက် မနက်အစော ၈း၀၀ လောက်မှာ ရခိုင်ပြည်နယ် ကျောက်ဖြူမြို့မှာ မီးရှို့တိုက်ခိုက် အကြမ်းဖက်မှုတွေ ဖြစ်ပွားပြီး အိမ်ခြေရာပေါင်းများစွာ မီးထဲပါသွားခဲ့ပါတယ်။
အိုးအိမ်တွေစွန့်ခွါထွက်ပြေးကြရတဲ့ ကျောက်ဖြူမြို့ ရပ်ကွက်တချို့က ဒေသခံတွေဟာ နီးစပ်ရာ ကယ်ဆယ်ရေးစခန်းတွေမှာ ခိုလှုံနေကြရပါတယ်။ ကျောက်ဖြူမြို့သမ္ဗာန်ချောင်းရပ်ကွက်မှာနေထိုင်ခဲ့တဲ့ အလယ်တန်းပြဆရာမ မနီလာသန်းကတော့ နှစ်ဖက်မိသားစုပိုင်ဆိုင်တဲ့ အိုးအိမ်တွေ မီးရှို့တိုက်ခိုက်ခံရတဲ့အကြောင်းကို ပြောပြပါတယ်။ ကလေးငယ်တွေအပါအ၀င် နှစ်ဖက်မိသားစု ၁၄ဦးဟာ ပြေးစရာနေရာမရှိဘဲ သက်ဆိုင်ရာအာဏာပိုင်တွေစီစဉ်ပေးတဲ့ ကျောက်ဖြူမြို့ ကျောက်တစ်လုံးဆားကွင်းဒုက္ခသည်စခန်းမှာ အခုနေထိုင်နေရတယ်လို့ ပြောပြသလို တဆက်တည်းမှာဘဲ သူတို့နေ့စဉ်နေထိုင်ရတဲ့ ဒုက္ခသည်စခန်းထဲကအခြေအနေကို အခုလို ပြောပြပါတယ်။
"၂၄ရက်နေ့ကရောက်တယ်၊ သုံးထောင်နီးပါးရှိသွားပြီ၊ အကုန်လုံးပေါ့နော် ကလေးရောလူကြီးရော၊ အဲ့ဒါ စားဖို့သောက်ဖို့ကြတော့လေ သူတို့က စားဖို့ကြတော့ စစ်တပ်ကအကူအညီပေးနေပါတယ်၊ ဆန်တွေဘာတွေပေါ့နော်၊ ပြီးတော့ ညစာကတော့ပေါ့ မနက်ဖက် ဆန်တစ်ဘူး၊ ညနေဆန်တစ်ဘူး အဲ့ဒါပဲပေါ့။ ရေကတော့ သိပ်အဆင်မပြေဘူး၊ လုံးဝရေက မကောင်းဘူးလေ၊ ဆန်လောက်ပဲရတယ်။ ကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှုက သူတို့တပ်ကနေ ဆေးမှူးတွေဘာတွေ ချပေးထားပါတယ်။"
ကျောက်ဖြူမြို့မှာ ပိုက်ဆိပ်ရပ်ကွက်၊ သမ္ဗာန်ချောင်းရပ်ကွက်၊ အရာရှိရပ်ကွက်၊ တိုးချဲ့ရပ်ကွက် စတဲ့ရပ်ကွက်တွေဟာ အစ္စလာမ်ဘာသာကိုးကွယ်ကြတဲ့ ကမန်လူမျိုး အများစု နေထိုင်ကြတဲ့ ရပ်ကွက်တွေဖြစ်တယ်လို့ မနီလာသန်းကပြောပါတယ်။
" ဒီမှာကတော့လေ ဟုတ် ပိုက်ဆိပ်၊ ပိုက်ဆိပ်ရယ် ဆင်ဖြူမော်ရယ် နောက်ပြီးတော့ အရာရှိရပ်ကွက်၊ တိုးချဲ့ရပ်ကွက်ရယ် သမ္ဗာန်ချောင်းရယ် အနောက်ပိုင်းရယ် အဲ့ဒါတွေပဲ အဲ့ဒါတွေက မွတ်စလင်တွေနေတဲ့ရပ်ကွက်တွေလေ အကုန်လုံးတော့၊ ဒီကလူတွေက ကမန်တွေများတယ် ကမန်တွေများပြီးတဲ့အခါမှ ရောက်တာ"
အောက်တိုဘာလ ၂၄ရက်နေ့ အခင်းဖြစ်ပြီး နေအိမ်မီးထဲပါသွားတဲ့ ကျောက်ဖြူကုလားပိုက်ဆိပ်လို့ လူသိများတဲ့ ပိုက်ဆိပ်ရပ်ကွက်မှာနေထိုင်ခဲ့တဲ့ နောက်ထပ်မိသားစုတစ်စုကတော့ သူတို့ပိုင်ဆိုင်တဲ့လှေနဲ့ ကျောက်ဖြူပင်လယ်ဝမှာ နာရီအတော်ကြာနေခဲ့ပြီးရပြီးတဲ့နောက်ပိုင်း စစ်တွေဘက်ကို ခိုလှုံဖို့ အောက်တိုဘာလ ၂၅ရက်နေ့က ရောက်ရှိခဲ့ပါတယ်။ အဲ့ဒီမှာ စစ်တွေကနေ တစ်နာရီကျော်လောက်ဝေးတဲ့ သဲချောင်းဒုက္ခသည်ကယ်ဆယ်ရေးစခန်းမှာ ခိုလှုံနေရပြီး သူတို့ကြုံတွေ့ရတဲ့ ဒုက္ခအခက်အခဲတွေကိုတော့ ဆယ်ကျော်သက်ကလေးငယ်တစ်ဦးက အခုလိုပြောပြပါတယ်။
ရခိုင်များ အကြမ်းဖက်မှုကြောင့် စက်လှေဖြင့် ထွက်ပြေးစဉ် လမ်းတွင် သေဆုံးသွားသော မွတ်စလင် ကလေးငယ်
" သဲချောင်းမှာ ကျွန်တော်တို့ရောက်ခါစကနေပြီးတော့ ဟိုး အရင်တုန်းက ကျွန်တော်မရောက်ခင်မှာ စစ်တွေက ဟိုမှာမီးရှို့ခံရတဲ့လူတွေရှိတယ်လေ။ ဒုက္ခသည်တွေ။ အဲ့ဒါ သူတို့တွေက ဟိုး ကျွန်တော်တို့နဲ့မြင်ပြီးတော့ တစ်နာရီခွဲလောက်လမ်းလျှောက်ရတဲ့ အဲ့ဒီနေရာမှာနေကြတယ်။ ကျွန်တော်တို့က သူတို့နဲ့ တစ်မိုင်ခွဲလောက်တော့ ဝေးတယ်။ သူတို့မှာ ဒီ နယ်ကလူတွေက အိမ်ရှိတယ်။ သူတို့အိမ်တွေမှာနေပြီးတော့ ကျွန်တော်တို့ဒုက္ခသည်တွေကို နေပြီးတော့ သူတို့ နေရာလေးဘာလေး ချပေးထားတာပေါ့။ ဇိမ်နဲ့တော့ဘယ်နေရမှာလဲ၊ ဒုက္ခခံပြီးနေရတာပေါ့။ ဒီလိုပါပဲပေါ့ လူတွေက၊ တဲမှာနေပြီးတော့ ကတ်ပြားတွေဘာတွေခင်းပြီးတော့ အိပ်ကြတယ်။ ထမင်းကတော့ ဟိုမှာ ဆန်တစ်ဘူးကို လေးယောက် လေးယောက်လောက် စားရတာပေါ့။ နောက်အကုန်လုံး ဒီမှာရောက်တဲ့ လူတွေအကုန်လုံးက ပိုက်ဆိပ်ရပ်ကွက်နဲ့ ကမန်လူမျိုးများ ဒီမှာအကုန်လုံး ကမန်လူမျိုးတွေချည်းပဲ။ ကျန်တဲ့လူမျိုးတွေသိပ်မရှိဘူး။ ဘင်္ဂလီတွေဘာတွေ အဲ့ဒါတွေ မရှိဘူး။ တစ်ရာမှာ တစ်ယောက်လောက်ကတော့ ရှိမှာပေါ့။"
ကျောက်ဖြူမြို့ကရပ်ကွက်တစ်ချို့ မီးရှို့တိုက်ခိုက်ခံရမှုမှာ အိုးအိမ်ဘယ်လောက်ပျက်စီးသွားတယ်၊ လူဦးရေဘယ်လောက် ဒဏ်ရာရတယ်၊ သေဆုံးသူ ဘယ်နှစ်ဦးရှိတယ်ဆိုတာ ကိုတော့ ကျောက်ဖြူမြို့တစ်ခုတည်းအနေနဲ့တော့ မသိရှိရသေးပါဘူး။ ဒါပေမယ့် အစိုးရထုတ်ပြန်တဲ့ကိန်းဂဏာန်းတွေကို ကိုးကားပြီး ကုလသမဂ္ဂက ဒီကနေ့ ထုတ်ပြန်တဲ့စာရင်းမှာတော့ ရခိုင်ပြည်နယ်မှာ အောက်တိုဘာလ၂၁ရက်ကနေ ၂၆ရက်နေ့ဝန်းကျင်အထိ ဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့ အကြမ်းဖက်မီးရှို့တိုက်ခိုက်မှုတွေမှာ အိမ်ခြေ လေးထောင့်ခြောက်ရာကျော် မီးလောင်ပျက်စီးသွားတယ်လို့ ပြောထားပါတယ်။ ကျောင်းဆရာမ မနီလာသန်းဟာ ၀န်ထမ်းဖြစ်တဲ့အလျောက် အစိုးရ၀န်ထမ်းအလုပ်ကိုသာ လုပ်လိုကြောင်း၊ သူတို့ပိုင်ဆိုင်မှုတွေဆုံးရှုံးသွားပြီ ဖြစ်တာကြောင့် လုပ်စားစရာ၊ နေစရာ၊ လုံခြုံမှုဆိုတာ မရှိတော့တာကြောင့် ရန်ကုန်မြို့ လိုနေရာမျိုးကိုသာ ပြောင်းရွှေ့နေထိုင်လိုကြောင်း RFA ကိုပြောပါတယ်။
ကျောက်ဖြူတင်မကဘဲ မင်းပြား၊ ရသေ့တောင်၊ မြေပုံ စတဲ့မြို့နယ်ခြောက်မြို့နယ်လောက်မှာ မီးရှို့တိုက်ခိုက်မှုတွေကြောင့် အိုးမဲ့အိမ်မဲ့ဖြစ်ရပြီး လူဦးရေ အနည်းဆုံး နှစ်သောင်းနှစ်ထောင်ကျော်လောက် ဘေးလွတ်ရာမှာထွက်ပြေးနေရတယ်လို့ ကုလသမ္မဂရဲ့ စာရင်းအရ သိရပါတယ်။
ပြီးခဲ့တဲ့ ဇွန်လတုန်းက ဖြစ်ခဲ့တဲ့ အကြမ်းဖက်မှုတွေကြောင့် အိုးမဲ့အိမ်မဲ့ဖြစ်ခဲ့ရတဲ့ ဒုက္ခသည်အရေအတွက်ကလည်း ခုနှစ်သောင်း ငါးထောင်လောက် ကယ်ဆယ်ရေး စခန်းတွေမှာ ခိုလှုံနေကြပြီးသား ဖြစ်ပါတယ်။ အခုဆိုရင် နောက်ထပ်တိုးလာတဲ့ဒုက္ခသည်တွေကို တွက်ကြည့်လိုက်ရင် ရခိုင်ပြည်နယ်ထဲမှာ ဒုက္ခသည်အရေအတွက်ဟာ တစ်သိန်းကျော်ရှိနေပြီလို့ ဆိုရမှာဖြစ်ပါတယ်။ နောက်ထပ်တိုးတဲ့ဒုက္ခသည်တွေအပြင် အရင်ရှိပြီးသားဒုက္ခသည်တွေကို နေရာပြန်လည်ချထားရေး၊ သူတို့တွေရဲ့စားဝတ်နေရေးနဲ့ ကလေးတွေရဲ့ပညာရေး စတာတွေဟာ ရခိုင်ပြည်နယ်အစိုးရနဲ့နေပြည်တော်အစိုးရအတွက် လတ်တလောရင်ဆိုင်နေရတဲ့ အကြပ်အတည်းတွေဖြစ်နေကြောင်း သတင်းတွေမှာ ရေးသားကြပါတယ်ခင်ဗျာ။
Posted: 29 Oct 2012 05:02 AM PDT
အောက်တိုဘာ၊ ၂၈ ၊ ၂၀၁၂ M-Media သတင်း-အောင်မောင်း
ယမန်နေ့ အောက်တိုဘာ၊ ၂၈ ၊ ၂၀၁၂ ည ၁၀ နာရီဝန်းကျင်က သင်္ဃန်းကျွန်းမြို့နယ် အစ္စလာမ်ဘာသာဝင် အများစုနေထိုင်ရာ ရပ်ကွက် ရှိ အစ္စလာမ်ဘာသာရေးစာသင်ကျောင်း ( မွတ်စလင်မ်များ အသိများသည့် အမည် ဟာဖိဇ်ဆိုလိုင်မာန် ကျောင်း) ကို ဆလွန်ကားတစ်စီး (နံပါတ်အုပ်ပြီးဖျက်ထား) မှာ မျက်နှာဖုံးစွပ် လူအပြည့်နဲ့ ၄-၅ ပတ်လောာ်ပတ်နေတာကြောင်းကို မသင်္ကာသည့် အတွက် ရပ်ကွက်နေ ပြည်သူများ လမ်းပေါ်လို့ ထွက်လာချိန် သုဝဏ္ဏ ဘက်သို့ ကားဖြင့် ထွက်ပြေးသွားကြောင်းနှင့် လမ်းလျောက်လာသည့် မွတ်စလင်မ် (၃) ယောက်အား"မင်းတို့ ကုလား ရပ်ကွက်များအား မီးကွင်းပစ်မယ် " ဟု ကားပေါ်မှ အော်ဟစ်ခြိမ်းခြောက်သွားကြောင်း M-Media မှ စုံစမ်းသိရှိရပါသည်။
သင်္ဃန်းကျွန်းမြို့နယ်သည် အမျိုးသားဒီမိုကရေစီပါတီသစ် NNDP ခေါင်းဆောင် ဦးသိန်းညွှန့် အနိုင်ရရှိထားသည့် မဲဆန္ဒနယ်မြေဖြစ်သည်။
ဦးသိန်းညွှန့်သည့် ပြည်သူလွှတ်တော်က ဖွဲ့စည်းပေးထားသည့် တရားဥပဒေစိုးမိုးရေး ကော်မတီ အဖွဲ့တယောက်လဲဖြစ်ပါသည်။
Posted: 29 Oct 2012 04:53 AM PDT
အောက်တိုဘာ၊ ၂၈ ၊ ၂၀၁၂ M-Media ဘာသာပြန်
မူရင်း – ရိုက်တာ သတင်းထောက် (စစ်တွေ မှသတင်းပေးပို့သည်)
ခြောက်ရက်ကြာ အကြမ်းဖက်မှူများ၊ ကျည်ဆံများနှင့် လောင်ကျွမ်းနေသော အိမ်များမှ ငါးဖမ်းလှေများဖြင့် ထွက်ပြေးနေရသော မွတ်စလင်ရှင်သန်ရစ်သူများ၏ တနင်္ဂနွေနေ့ က ပြောကြားချက်များ။
People displaced by the recent violence in the Kyukphyu township sit together after arriving to Thaechaung refugee camp, outside of Sittwe October 28, 2012. REUTERS/Soe Zeya Tun
ကမ္ဘာ့ကုလသမဂ္ဂ စာရင်းအရ ၂၂,၅၈၇ ယောက် ထွက်ပြေးနေရပြီး ၆၇ယောက် သေဆုံးခဲ့သည်ဟုဆိုသော ရခိုင်ပြည်နယ် အခြေအနေသည် ယခင် စစ်အစိုးရကို ကိုဆက်ခံသော ပြုပြင်ပြောင်းလဲရေး အတွက် ကြိုးစားနေသည့် အရပ်သား အစိုးရဟု အတွက် စမ်းသပ်ချက် ဖြစ်သည်။
"ကျမတို့ကို အိမ်ထဲမှာပဲ နေရမယ်လို့ ညွန်ကြားထားပေမယ့် အိမ်တွေကို မီးရှို့ခံရတယ်" ဟု အသက် ၃၃နှစ် အရွယ် ကလေး လေးယောက်မိခင် ဖြစ်သူ အရှရာဘာနူးက ဆိုသည်။ ၎င်းသည် ကျောက်ဖြူ ကမ်းခြေရှိ မွတ်စလင် ရပ်ကွက်ကို အောက်တိုဘာ ၂၄ တွင်ဖြိုဖျက်ခံရ၍ ထွက်ပြေးလာသူ ဖြစ်သည်။
"ကျမတို့ ထွက်ပြေးတော့ ရဲတွေနဲ့ ရခိုင်တွေရဲ့ ပစ်ခတ်တာ ခံရတယ်။ အိမ်တွေကိုလည်း မီးမငြိမ်းနိုင်ဘူး"
နယူယောက်မြိုအခြေပြု လူ့ ခွင့်ရေးစောင့်ကြည့်ရေးအဖွဲ့ မှ မကြာခင်က ကျောက်ဖြူမြို့ Mislim ရပ်ကွက်များ မဖျက်ဆီးမီ နှင့် ဖျက်ဆီးခံရပြီး နှိုင်းယှဉ်ဖော်ပြထားသော ဂြိုဟ်တု ဓါတ်ပုံများကို များမကြာမှီက ထုတ်ပြန်လိုက်သည်။
ကျောက်ဖြူမြိုသည် ရခိုင်ပြည်နယ်- မြို့တော်စစ်တွေမှ တောင်ဖက် ရ၅ မိုင်ကွာတွင် တည်ရှိပြီး တရုတ်နိုင်ငံ၏ မဟာဗျူဟာကျ ရင်နှီး မြုပ်နှံမှု့များ တည်ရှိရာဖြစ်သည်၊ ၄င်းရင်းနှီး မြုပ်နှံမှု့ မှာ ဘင်္ဂလားပင်လယ်အော်မှ ရေနံနှင့်သဘာဝဓါတ်ငွေ့ကို ပိုက်လိုင်း ၂ ခုဖြင့် တရုတ်ပြည် ၏စွမ်းအင်လိုအပ်နေသော အနောက်ဖက်ဒေသကြီး များသို့ ပို့ဆောင်ရန်ဖြစ်သည်။
တနင်္ဂနွေနေ့တွင် ပဋိပက္ခ ဖြစ်ပေါ်သည့် သတင်းမရှိသော်လည်း သဲချောင်းဒုက္ခသည် စခန်းတွင် ရှိသော ရိုက်တာ သတင်းထောက် အဆိုအရ ကျောက်ဖြူမြို့ မှ ထွက်ပြေး လာသူများ တဖွဲဖွဲရောက်ရှိလာနေကြောင်းသိရသည်။ လူ့အခွင့်အရေးစောင့်ကြည့်အဖွဲ့- သတင်းဓါတ်ပုံများအရ ကျောက်ဖြူမြိုတွင် ဖျက်ဆီးခံရသော အိမ်ခြေ နှင့် လှေပေါ်အိမ် အရေအတွက်မှာ ၈၁၁ လုံး အထက်ရှိသည်။
"ရခိုင်တွေက ဓါးတွေနဲ့လိုက်ခုတ်တယ်။ အိမ်တွေကို မီးရှို့တယ်။ ကျနော်တို့မှာ အဝတ်တထည်က လွဲလို့ ဘာမှ မကျန်ဘူး ဟု သဲချောင်းဒုက္ခသည် စခန်းသို့ ရောက် ရှိလာသော ၆၃ နှစ် အရွယ် အမျိုးသမီး ဇိုမီလာ မှ ငိုကြွေးပြောဆိုသည်။ "`ပြန်လို့လဲမရတော့ဘူး" ဟုဆိုသည်။
အစိုးရ၏ခန့်မှန်းချက်အရ အောက်တိုဘာ ၂၁ ရက်မှစကာ ရခိုင်ပြည်နယ်တွင် ဖျက်ဆီးခံရသော အိမ်ခြေပေါင်း အနည်းဆုံး ၃၀၀၀ ရှိသည်၊ လူ့ခွင့်ရေအဖွဲ့များ၏ အဆိုအရ အမှန်တကယ်သေဆုံး သူရေတွက်မှာ တရားဝင် စာရင်း များ ထက် များစွာ ပိုနိုင်သည်ဟုဆိုသည်။
"ရခိုင်တွေရ မီးရှို့နေတဲ့အချိန်မှာ ရဲတွေက ရပ်ကြည့်နေတယ်" ဟု အသက် ၃၀ အရွယ် အဗဒူအန်ဝါး က ဆိုသည်။ "ရခိုင်တွေက လိုက်ရိုက်တယ် ရဲကသေနတ်နဲ့ ပစ်တယ်။ ကျနော်တို့ ပင်လယ်ထဲကို ထွက်ပြေးတော့ လည်း နောက်က လိုက်ပြီး ပစ်တယ် ရိုက်တယ်။" ဟုဆိုသည်။
ဗုဒ္ဓဘာသာဝင် ရခိုင်လူမျိုးတယောက်၏အဆိုမှာ မတူညီပေ။ ရိုတ်တာ မှ တယ်လီဖုန်းဆက် မေးမြန်းရာတွင် ရခိုင်နှင့် မွတ်ဆလင်တို့ အပြန်အလှန် ဓါးများ ဒုတ်များ လေးခွများ ဖြင့် တိုက်ခိုက် ကြသည်ဟုဆိုသည်။ အဆုံးစွန် မှာ မူဆလင်တွေဟာ နောက်ဆုံးရွေးချယ်မှုအဖြစ် သူတို့အိမ်သူတို့ မီးရှို့ ထွက်ပြေးကြတယ် — ဟုဆိုသည်။ ဒေသခံများ၏ခန့်မှန်းချက်အရ ကျောက်ဖြူမြို့ မှာ ထွက်ခွာသွားသော လှေအရေအတွက် ၈၀ မှ ၁၀၀ ခန့် ရှိသည်။
ခြေဗလာနှင့် ပြေးလာသော မွတ်ဆလင် ယောက်ကျား မိန်းမများသည် ရွှံ့ နွံထူထပ်သော သဲချောင်းကမ်းစပ် ပေါ်သို့ ကလေးများပွေ့ချီကာ ရောက်ရှိလာကြသည်။ ကလေးများနှင့် ၄င်းတို့၏ ကျန်ရစ်သော ဥစ္စာအနည်ငယ် ကို သယ်ဆောင် လာ၏။ "လူတွေအများကြီး အသတ်ခံရတာကို တွေ့ခဲ့ရတယ်" ဟု ကျောက်ဖြူမြို့ မှ ထွက်ပြေးလာသူ အသက် ၅၄ နှစ် အရွယ် နိုရူးဟူစိန် ကပြောသည်။ "ကျနော်တို့ ပြန်မတိုက်ခိုက်နိုင်ပါဘူး ။ ဘယ်လိုလုပ်တိုက်ခိုက် နိုင်မှာ လဲ ကျနော်တို့က ရခိုင်ရွာတွေအလယ်မှာနေရတာ။ ကျနော်တို့ ကမ်းခြေဖက်ကို ထွက်ပြေးပြီး လှေစီး ပြီး လွတ်မြောက်လာကြတာပါ" ဟုပြောသည်။
သဲချောင်းစခန်းသည် ပြီးခဲ့သော ဇွန်လက ဖြစ်ပွားခဲ့သော လူ (၈၀) သေဆုံးခဲ့ရပြီး အနည်းဆုံး လူ (၇၅၀၀၀) ထွက်ပြေးခဲ့ရသော အကြမ်းဖက်မှု့ အပြီးတွင် ဖွဲ့စည်း ခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်။ ညစ်ပတ် မွန်းကြပ်လျှက် လူဦးရေပြွတ်သိပ်နေသော စခန်းမှာ ပိုမို များပြားလာနေသော ဒုက္ခသည်များအတွက် မလုံလောက်နိုင်ပေ။
အမည်မဖော်ပြလိုသူ ဒေသခံ တာဝန်ရှိသူအဦးအဆိုအရ စစ်တွေသို့ ယခု ရက်ပိုင်းအတွင်း ရိုဟင်ဂျာ ဦးရေ (၁၉၄၅) ကို သယ်ဆောင်လာသော လှေပေါင်း ၄၇ စင်း ဆိုက်ကပ်ခဲ့သည်။ မြန်မာ ဗုဒ္ဓဘာသာဝင် အများစု နှင့် ဖွဲ့စည်းထားသော မြန်မာအစိုးရကမူ လူဦးရေ (၈၀၀,၀၀၀) ခန့်သော ရိုဟင်ဂျာများသည် ဘင်္ဂလားဒေ့ရ်ှမှ ခိုးဝင်လာသူများဟု ဆိုကာ နိုင်ငံသားဖြစ်ခွင့်ကို ငြင်းပယ်လျက်ရှိသည်။ ဘင်္ဂလားဒေ့ရ်ှ ကမူ ရိုဟင်ဂျာ ဒုက္ခသည်များကို လက်ခံရန် ၁၉၉၂ ခုနှစ် ကတည်းက ငြင်းပယ်လျက် ရှိသည်။ ကမ္ဘာ့ကုလသမဂ္ဂ ကမူ ရိုဟင်ဂျာများမှာ မိတ်ဆွေမဲ့သော အခြေအနေဟုခေါ်ဆိုသည်။
နောက်ထပ်ရောက်လာစရာ ရိုဟင်ဂျာ လှေတွေ အများကြီး ကျန်သေးတယ်ဟု သဲချောင်းမှလူများကဆိုသည်။
ဒုက္ခသည်စခန်းများသည် စစ်တွေမြို့မှဝေးသော ကမ်းခြေအနီရှိ ချိုင့်ခွက်ထူသော လမ်း၏အဆုံးတွင်ရှိသည်။ ရွက်ဖြင်တဲ နှင့် နှစ်ထပ်တဲအိမ်များသည် ရွှံထူသောလမ်းများဖြင့် ဆက်သွယ်ထားပြီး တစ်ဒါဇင်ခန့်ရှိသော လက်နက်မဲ့ လုံခြုံရေးများက စောင့်ကြပ်လျက်ရှိသည်။
မြင်သာတဲ့ အကူအညီဆို လို့ ကမ္ဘာ့စားနပ်ရိက္ခာ အဖွဲ့မှာ ထောက်ပံ့သော ဆန်အိတ်များသာရှိသည်။ ဆန်အိတ်ခွန်များကို အခင်းလုပ်၍ အိပ်ကြရသည်။ လူအများအပြားမှာ သစ်ပင်အောက်တွင်သာ အိပ်ရသည်။
ရိုက်တာသတင်းထောက်မှ ကျန်းမာရေးဝန်ထမ်း တစ်ဦးတစ်ယောက်မှ မတွေ့ခဲ့ပေ။ အချို့ စခန်းများတွင် နေထိုင်သူများမှာ ငှက်ဖျားမိသူများ ရှိသည်။ ကလေးများသည် အဝတ်ဗလာ နေရပြီး အဟာရ မပြည့်ဝပေ။
ဇွန်လကတည်းက ဤစခန်းတွင်နေခဲ့သူ အသက် ၃၄နှစ် အရွယ်၊ ယခင်က ငါးရောင်းသူ မိုဟာမက် ဂျေကာ ကမူ ၎င်း၏ အမျိုး ၁၁ဦးသေဆုံးခဲ့သည်ဟု ဆိုသည်။
ဘာမျှော်လင့်ချက်မှ မရှိဘူး။ ဒီအကြမ်းဖက်မှု့တွေ ရပ်တန့်စေချင်ပြီ။ ငြိမ်းငြိမ်းချမ်းချမ်း နေချင်ပြီ။ ဒီလိုဆက်နေသွားရရင်တော့ ဘယ်သူမှ အသက်ရှင်ကျန်မှာ မဟုတ်ပါဘူး။ ဟုဆိုသည်။
ကမ္ဘာ့ကုလသမဂ္ဂ အဆိုအရ အကြမ်းဖက်မှုများကြောင့် ရှစ်မြို့နယ်ရှိ အိမ်ခြေ ၄၆၀၀ ခန့် ပျက်စီးခဲ့ပြီး ထပ်မံထွက်ပြေးရသူ ထပ်မံတိုးပွား လာဖွယ်ရှိသည် ဟုဆိုသည်။
"ကြောက်ရွံ့မှု့နှင့် မယုံကြည်မှု့တွေ ကို ထွက်ပြေးလာသူတွေရဲ့ မျက်လုံးတွေမှာ မြင်ရတဲ့ အတွက် ဝမ်းနည်း ပူပန်မိတယ် "ဟု ကမ္ဘာ့ကုလသမဂ္ဂ ဌာနေကိုယ်စားလှယ် အာရှော့နီဂမ် မှ ၎င်းဒေသမှ အပြန်တွင် ပြောဆိုသည်။
အကြမ်းဖက်မှု့ ကြောက်ရွံ့ အယုံအကြည် ကင်းမဲ့မှု့ များသည် စီးပွားရေး လူမှု့ရေး တိုးတက်မှူ နှင့် ဒီမိုကရေစီဖေါ်ဆောင် နေသော မြန်မာနိုင်ငံ ဆိုသော အချက်ကို ဝိရောဓိ ဖြစ်လျက်ရှိသည်။
Reuters.M-Media မှ မြန်မာလို ဆီလျော်အောင်ဘာသာပြန်ဆိုတင်ပြပါသည်။
Posted: 29 Oct 2012 04:42 AM PDT
Source: Muslims in Yangon's Thin Gan Gyune Threatened With Arson Attacks
October 29, 2012 M-Media Reporting by Aung Mung
Muslim residents in Yangon's Thin Gan Gyune township have been threatened with arson attacks.
On October 28 at 10 PM,acar full of masked people was driving around an Islamic school, locally known as Hafiz Solaiman School, for four or five times.
When the residents came to the street to observe the situation, the group drove away towards Thuwanna township.
They screamed at three Muslims walking on the street that Muslim quarters will face arson. The Muslims were not able to identify the car because the number plate was remove.
Thin Gan Gyune township is the voting area of Thein Nyunt from New National Democratic Party. He isamember of Parliamentary Rule of Law Committee led by Aung San Suu Kyi.
Residents have reported the incident to Thein Nyut's party this morning, but there has been no response from the party up to the time of this report at 2PM.
Posted: 29 Oct 2012 06:04 AM PDT
Petani di Sekinchan membuat laporan polis terhadap Menteri Pertanian dan Industri Asas Tani, Datuk Seri Noh Omar berhubung tender pemberian benih padi bernilai RM164.8 juta kepada pembekal yang tidak memenuhi kriteria tender.
Menurut laporan polis yang dibuat petani itu semalam, mereka mengesyaki wujud salah guna kuasa dan penyelewengan dalam proses agihan tender benih padi sah bagi tahun 2013 hingga 2014.
Laporan polis oleh Misran Serman, Loo Kim Yong dan S Ragavan di balai polis Sekinchan itu antaranya mendakwa lebih separuh kuota subsidi benih padi sah setahun berjumlah 80,000 tan metrik dianugerahi kepada syarikat kroni.
Antara lain kandungan laporan polis itu juga menyebut kebimbangan sekiranya terdapat masalah yang tidak dapat ditangani syarikat terbabit sehingga mengancam bekalan benih padi sah.
Noh pada 18 Oktober bagaimanapun mendakwa isu kuota itu cuba dipolitikkan oleh pembangkang "seolah-olah pemberian kuota mementingkan kroni semata-mata".
Sambil menafikan dakwaan itu, Noh berkata, kementerian sebenarnya memberikan peluang kepada syarikat berminat walaupun tarikh tender telah tamat dan ekoran daripada kelonggaran tersebut, 10 syarikat diberikan peluang. -mk
Posted: 29 Oct 2012 04:13 AM PDT
I like Miles Townes' blog because of the way he documents his dissertation research for the PhD in Political Science (George Washington University), and the occasional collision of his eclectic research interests with the real world. His major field is International Relations and his minor is Research Methods. His research focus is on the sources of and constraints on the state's capacity for violence, and how this determines the use of violence in both foreign and domestic conflicts. He is also interested in technology and politics, civics, democratic governance, globalization, and complex systems. The following article isagreat example of his fine writing and insightful analytical skills.
This month's Harper's has as its feature articleapiece by Victoria Collier, "How To Rig an Election". It is damning, as the title suggests. Collier details the extent to which American elections have fallen prey to manipulation. If you vote in the United States, you should be deeply concerned by this story.
The problem is not voter ID — as the GOP would have you believe — but the computer systems now used to record and tabulate votes across the country. I am going to quote Collier at length because this is an important issue.
…this era was inaugurated by Chuck Hagel, an unknown millionaire who ran for one of Nebraska's U.S. Senate seats in 1996. Initially Hagel trailed the popular Democratic governor, Ben Nelson, who had been elected inalandslide two years earlier. Three days before the election, however,apoll conducted by the Omaha World-Heraldshowedadead heat, with 47 percent of respondents favoring each candidate. David Moore, who was then managing editor of the Gallup Poll, told the paper, "We can't predict the outcome."
Hagel's victory in the general election, invariably referred to as an "upset," handed the seat to the G.O.P. for the first time in eighteen years. Hagel trounced Nelson by fifteen points. Even for those who had factored in the governor's deteriorating numbers andalast-minute barrage of negative ads, this divergence from pre-election polling was enough to raise eyebrows across the nation.
Few Americans knew that until shortly before the election, Hagel had been chairman of the company whose computerized voting machines would soon count his own votes: Election Systems & Software (then called American Information Systems). Hagel stepped down from his post just two weeks before announcing his candidacy. Yet he retained millions of dollars in stock in the McCarthy Group, which owned ES&S. And Michael McCarthy, the parent company's founder, was Hagel's campaign treasurer.
Whether Hagel's relationship to ES&S ensured his victory is open to speculation. But the surprising scale of his win awakenedanew fear among voting-rights activists and raisedadisturbing question: Who controls the new technology of Election Night?
Hagel's surprise win is one of many Collier documents; another, Chambliss over Cleland, 2002:
In 2002, the G.O.P. regained control of the Senate with such victories. In Georgia, for example, Diebold's voting machines reported the defeat of Democratic senator Max Cleland. Early polls had given the highly popular Clelandasolid lead over his Republican opponent, Saxby Chambliss,afavorite of the Christian right, the NRA, and George W. Bush (who made several campaign appearances on his behalf). As Election Day drew near, the contest narrowed. Chambliss, who had avoided military service, ran attack ads denouncing Cleland—a Silver Star recipient who lost three limbs in Vietnam—asatraitor for voting against the creation of the Department of Homeland Security. Two days before the election,aZogby poll gave Chamblissaone-point lead among likely voters, while the Atlanta Journal-Constitutionreported that Cleland maintainedathree-point advantage with the same group.
Cleland lost by seven points. In his 2009 autobiography, he accused computerized voting machines of being "ripe for fraud." Patched for fraud might have been more apt. In the month leading up to the election, Diebold employees, led by Bob Urosevich, appliedamysterious, uncertified software patch to 5,000 voting machines that Georgia had purchased in May.
Bush over Kerry, 2004:
Two years later, of course, John Kerry lost the presidency in Ohio. In this key swing state, election monitors were besieged by complaints of G.O.P.orchestrated voter suppression, intimidation, and fraud. Myriad voting-machine anomalies were reported, including "glitches" that flipped votes from Kerry to Bush. A phony terror alert in Republican Warren County (the FBI later denied issuing any such warning) allowed officials to move ballots illegally to an auxiliary building and count them out of public view. Presiding over the election was the Republican secretary of state, J. Kenneth Blackwell,afiercely partisan fundamentalist Christian who also served as co-chair of Ohio's Committee to Re-Elect George W. Bush.
Posted: 29 Oct 2012 04:02 AM PDT
Posted: 29 Oct 2012 03:19 AM PDT
ဗုဓ္ဒဘာသာဂရုမှာ ကိုဝေသာလီဖုန်းမောင်က ဂေါတမဘုရားရှင်ဟာ ကုလားမဟုတ်ပါဘူး နီပေါလူမျိုးပါလို့ ဆိုထားတဲ့ အဆိုကို အန်ကယ် Fair Judge ကြီးက ပြန်လည်ရှင်းပြထားသော ကွန့် မန့် လေးပါ ဗဟုသုတ ရစေဖို့ နဲ့ဆွေးနွေးသူတို့ ရဲ့ လေ့ လာမှု့ ကို လေးစားသောအားဖြင့် ပိုစ့်အဖြင့်တင်လိုက်ပါတယ် …………………………………………………………….
ပါဠှိ ဘာသာမှာ ဗုဒ္ဓရဲ့ အနက်တခုက အသက်အရွယ်ကြီးရင့်သူတဲ့။ ကြားဖူးလားတော့ မသိဘူး။ အဘိုးကြီးတွေကို ဘူဒါးကြီး လို့ခေါ်တာလေ။ အဲဒီ ဗွဒ်ဒါး ဆိုတာ ဗုဒ္ဓ ဘဲ။ နောက်အနက်တခုက တော့ "သိပြီးသူ" ဗျ။ (ကိလေသာတည်းဟူသော အိပ်ပျော်ခြင်းမှ) "နိုးလာသူ" လို့ ဘယ်လိုမှ အဓိပ္ပာယ် မရဘူးဗျ။ "ဗုဒ္ဓိ" (ပါဠှိ အသံအစစ် ဗွဒ်ဒီဟ်) ဆိုတာ က အသိဥာဏ် ၊ အမြော်အမြင် လို့ အနက်ရတယ်ဗျ။ ဗုဒ္ဓ ဟာ ဘာလူမျိုးလဲ? ကို ဝေသာလီ မောင်ဖုန်း က ကုလားလူမျိုး မဟုတ်ဘူးလို့ ဆိုထားတယ်။ ဗုဒ္ဓ မွေးဖွားရာဒေသနဲ့ပတ်သက်ပြီး ပညာရှင်တွေ ကြားမှာ အကွဲအလွဲရှိတယ်ဗျ။ တချို့က ကလိလဝတ် လို့ပြောတယ်၊ တချို့က လုမ္ဗနီ လို့ပြောတယ်။ တချို့က ဩရိစ္စ လို့ပြောတယ်။ တချို့က ဥတ္တရ ပရဒေ့ရှ် လို့ပြောတယ်။ ဒါပေမဲ့ အားလုံးတညီတညွတ် ထဲဝန်ခံထားတာက ဗုဒ္ဓဟာ ဟိန္ဒူမိသားစု က မွေးခဲ့တယ် ဆိုတာဘဲ။ ဗုဒ္ဓ ရဲ့ အဖေ သုဒေါဒနမင်းဟာ စကြာ အနွယ်တို့ရဲ့ခေါင်းဆောင်ဖြစ်ပြီးအဲဒီ စကြာအနွယ်တွေ ဟာ အိန္ဒိယမြောက်ပိုင်းနဲ့ နီပေါ တောင်ပိုင်း နယ်စပ်မှာနေထိုင်သူတွေဖြစ်တယ်။ အဲဒီစကြာ နွယ်ဝင်တွေ ဟာ မောင်နှမရင်းခြင်း အိမ်ထောင်ပြုတဲ့ လူမျိုးတွေ ဖြစ်ကြောင်း သူတို့ကို သာကီနွယ်လို့လဲ ခေါ်ကြောင်း ဗုဒ္ဓ ကိုယ်တိုင်က ဒီဃနိကာယ်၊ သီလက္ခန် ပါဠှိတော်၊ အမ္ဗ္ဗဋ္ဌသုတ်၊၂၆၇ မှာ ဂုဏ်ယူဝံ့ကြွားထားပါတယ်။ လက်ရှိ နီပေါ လူမျိုးတွေ ဟာ တိဘက်စပ် ဂေါ်ရခါးတွေ ဖြစ်ပေမဲ့၊ ဗုဒ္ဓခေတ်တုန်းက နီပေါဒေသ မှာ Mongoloid တွေ မရှိပါဘူး။ Nepal လူမျိုးတွေရဲ့ မူရင်းဘာသာ စကားဟာ Khaskura ခါးစ်ကူရာ (ခ) ဂေါ်ရခါး Gurkha ဘာသာ စကားဖြစ်ပါတယ်။ ဂေါတမဗုဒ္ဓ ရဲ့ဘာသာစကားဟာ မဂဓ Maghadha ပါဠှိဖြစ်ပါတယ်။ ဗုဒ္ဓ ဟာ နီပေါလူမျိုးဖြစ်ခဲ့ရင် ဘာကြောင့် ဂေါ်ရခါး စကားမပြောဘဲ မဂဓ စကားပြောခဲ့တာလဲ? အဖြေကတော့ရှင်းရှင်းလေးပါ ဗုဒ္ဓက လက်ရှိနီပေါလူမျိုးဂေါ်ရခါး လုံးဝမဟုတ်လို့ပါဘဲ။ အဲဒီ ခေတ် က Mongoloid တွေဟာ နီပေါ မှာမရှိပါဘူး။ Mongoloid ဆိုတဲ့ ဝေါဟာရ က
မွန်ဂိုစပ် / မွန်ဂိုမှဆင်းသက် လို့ အနက်ရပါတယ်။ အဲဒီတုန်းက နီပေါမှာနေထိုင် သူတွေဟာ အိန္ဒိယသားတွေပါဘဲ။ ကုလ ဆိုတာ အမျိုးဇာတ် လို့အနက်ရရုံ မက မြတ်သောအမျိုးလို့လဲ အနက်ရပါသေးတယ်။ မြန်မာစကားမှာ ကုလားခြောက်ဆယ် ရှမ်းသုံးဆယ်မြန်မာ သတ္တ မွန်လေးဝ လို့ အဆိုရှိပါတယ်။ ကုလား ဆိုတာ အိန္ဒိယတိုင်းသားကိုသာ ခေါ်တာမဟုတ်ဘဲ၊ အင်္ဂလိပ်၊ ပြင်သစ်၊ ပါရှား၊ အာရပ် စတဲ့လူမျိုးတွေကို ပါ ကုလားလို့ခေါ်ကြတာဖြစ်ပါတယ်။ ပန်ဂျာပီ ဆင်ဒီ ဘန်ဂါလီ စတဲ့ အိန္ဒိယမြောက်ပိုင်းသားတွေ ဟာ Aryan အာရိယန်တွေဖြစ်ပြီး ၊ တမီလ် တေလဂူ ဆင်ဟာလီ (သီရိလင်္ကာ) အစရှိတဲ့ တောင်ပိုင်းသားတွေ ဟာ တော့ Dravidian ဒြာဝီဒီယန်တွေ ဖြစ် ပါတယ်။ အိန္ဒိယ သား ဟိန္ဒူဗြဟ္မဏ ဘာသာဝင်တွေ ဟာ ယနေ့အထိ သူတို့ကိုယ်သူတို့ အာရိယာ လို့ခံယူထားကြပါတယ်။ အာရိယာစမားဂ်ျ ဆိုတာကြားဖူးမှာပေါ့။ တနည်းအလွယ်မှတ်နိုင်အောင်ပြောရရင် အာရိယန်တွေ က အသားဖြူပြီး ချောမောတယ်၊ ဒြာဝီဒီယန်တွေ က အသားနက်ပြီး အရုပ်ဆိုးတယ်ပေါ့ဗျာ။ ရာမဇာတ်တော် မှာ ရာမတို့ဟာ အာရိယန်ဖြစ်ပြီး ရာဝဏ ဟာဒြာဝီဒီယန်ဖြစ်ပါတယ်။ အာရိယန် လဲ ကုလား ဒြာဝီဒီယန် လဲ ကုလားပါဘဲ။ ဗုဒ္ဓဟာ အာရိယန်ဖြစ်ဖို့ ရာနှုန်းအတော်များပါတယ်။ သို့သော် အာရိယန် ဖြစ်လဲ ဗုဒ္ဓ ဟာ ကုလားပါဘဲ။ ဗုဒ္ဓ ဟာ Mongoloid တရုတ် အနွယ်လုံးဝ မဟုတ်ပါ။ သူ့နာမည်ကို ကြည့်လေ စစ်ဒါးသ် ဂေါသမ် သိဒ္ဓတ္ထ တဲ့။တရုတ်နာမည်လား ကုလားနာမည်လား? ဗုဒ္ဓ ဟာကုလား ပါဗျာ။ ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။
စကားကြွင်း။aboriginal ဆိုတာမရှိပါဘူး။ aboriginal ပါ။ Aryan က Mongoloid မဟုတ်ပါဘူး။ Caucasian ပါ။
Posted: 29 Oct 2012 02:26 AM PDT
ဘုန်းကြီး တွေ က နိုင်ငံတော်ရဲ့ တရားစီရင်ရေးအာဏာ (Jurisdiction)
ကိုပါ ချုပ်ကိုင် လာပြီလား? ဥပဒေ အရ ဆိုရင် ဒီလို ဘုန်းကြီးတွေကို
ကို နိုင်ငံတော် ပုန်ကန် မှုနဲ့ တကျွန်း ပြစ်ဒဏ်ချလို့ရနေပြီ။
ဦးသိန်းစိန် အစိုးရ ဘာလုပ်နေတာလဲ?
Posted: 29 Oct 2012 02:22 AM PDT
Our flight landed at the Kuching International Airport 25 minutes late as it arrived late at KLIA from Changi earlier. A short while after the aircraft docked, I sawaground crew lugging my wheelchair up the stairs into the aeroridge.
Malaysia Airlines ground crew delivering my wheelchair to the boarding gate at Kuching International Airport.
I got off the plane in less than 10 minutes after the last passenger stepped off. It was faster than I had expected. As soon as I transferred to my wheelchair, I checked to see if all parts were intact. I ran my fingers over each and every of the fibre spokes. None were broken. I leaned forward to see if the casters fluttered as I was being pushed to the baggage claim area. They rolled smoothly. Fluttering casters indicateabent fork or worse,adamaged frame. I breathedasigh of relief.
We were greeted by the officers from the Jabatan Kebajikan Masyarakat Negeri Sarawak outside the arrival hall. They were there to take us to the Merdeka Palace Hotel & Suites, the venue of the seminar and also our place of accommodation. In the same vehicle with Victor and I were Katsura Oikawa, Chief Advisor on Project to Support Participation of Persons with Disabilities (Phase II) to the Japan International Cooperation Agency (JICA) and Terumi Shikata, JKM-JICA Project Coordinator. We were in the same flight from Kuala Lumpur just now.
First view of Kuching somewhere near the Kuching International Airport.
When we got to our room in the hotel I discovered that my wheelchair could barely fit through the bathroom door. I could go in as far as the basin counter only. The toilet bowl blocked the way to the shower area. As I catheterised, I wondered how I could get past the toilet bowl to takeashower. Obviously, that was not an accessible room.
Joanna Yap, Phyllis Wong, Victor Chin and Peter Tan at Merdeka Palace Hotel & Suites, Kuching, Sarawak.
First order of the day in Kuching wasameet up with Phyllis for lunch at the hotel andapress interview at the same time with her colleague Joanna from the Borneo Post. Phyllis got this lovely gift for Wuan,atraditional ceramic bead necklace made byafamous craftswoman of the Lun Bawang tribe in Sarawak. Thank you, Yan!
Lun Bawang bead necklace –alovely gift from Phyllis to Wuan.
Friends have insisted that I must at least eat laksa and kolo mee while there. The Aurora Court only had the former albeit at an exceptionally inflated price. The Sarawak laksa looked somewhat similar to Penang curry me. Joanna told me that Sarawakians take exception to their laksa being equated with curry mee. The gravy did not taste the same though. The other difference is that the chilli by the side came with calamansi lime.
Sarawak laksa at the Merdeka Palace Hotel & Suites, Kuching, Sarawak.
We adjourned to the Seattle Coffee & Tea at the other end of the lobby to continue with our conversation and the interview after lunch. I enjoyed the conversations that the four of us had. We not only talked about disability issue but also the heritage buildings in Malaysia and the people of Kuching and their food.
Victor suggested that we go onashort city tour by car for me to see the sights in Kuching as it would be difficult to move around by wheelchair due to the poor accessibility of the street environment. The concierge hailedataxi for us,aToyota Innova, that I struggled to get into due to its high seats.
Joanna played tourist guide as she narrated the significance and history of the various buildings and landmarks along the way. I thought the Kuching Waterfront is an interesting place to hangout for watching boats traverse the meandering Santubong River and people going about their activities along both sides of the riverbanks.
This cat statue at Jalan Padungan will be dressed according to the various festival celebrated.
It was said that one has not really visited Kuching if one has not seen the cat statues located at several intersections of main roads in the city. The cat statue at Jalan Padungan, we were told, would be garbed in different ethnic costumes according the the festival of the day. It was just plain white when we visited.
The half-hour tour around Kuching, while enjoyable, revealed that moving around inawheelchair would be very difficult and dangerous. I was glad we took the easy way by cab. If not, it would have been one struggle after another moving from place to place. Nevertheless, I certainly would like to visit this city again to savour the old world charms and for the food that I did not get the opportunity to savour. Thank you again, Yan, for arranging this wonderful tour at the spur of the moment and for insisting to pay for everything.
Kueh chap in Kuching – pork, innards, coagulated and tau kua braised in soy sauce gravy.
Back at the hotel, afterashort rest, Victor got dinner fromapopular kuey chap shop nearby. It was different from the kueh chap that I used to eat in Penang. Meat, innards and coagulated blood were braised inasoy sauce gravy. It tasted very similar to tau eu bak. The belly pork I had was tender. I liked it very much, and truth be told, I exceeded my protein quota for the day.
Backdrop for the Sarawak State Supported Employment Seminar 2012 at the Merdeka Palace Hotel & Suites.
There wasameeting of speakers later in the evening. It was to ensure that our presentations and the equipment would be running smoothly during the seminar. Good thing we didatrial run as the first laptop we used could run stream the videos. The videos running in second laptop did not have sound. After fiddling with the settings for some time, we got everything to run perfectly. I went back to my room and hoped it would work during the seminar as I would be the first speaker for the day. But Murphy's Law struck when I least expected it the next day.
Journey To Kuching – The Preparation
Kuching – Day 1 Part 1 of 2: October 21, 2012
Scald Wound –2Weeks After
Posted: 29 Oct 2012 02:11 AM PDT
Posted: 29 Oct 2012 01:56 AM PDT
၁) ဒေါသအမျက်ထွက်နေသူကို အမျက်မထွက်သဖြင့် အောင်နိုင်ခြင်း၊
၂) မကောင်းသောယုတ်မာသူကို ကောင်းတရားဖြင့် အောင်နိုင်ခြင်း၊
၃) စေးနှဲဝန်တိုသူကို ပေးကမ်းခြင်းဖြင့် အောင်နိုင်ခြင်း၊
၄) မဟုတ်မမှန် ဖောက်ပြန်ချို့ယွင်းသူကို မှန်ကန်မှုဖြင့် အောင်နိုင်ခြင်း၊
၅) ခပ်သိမ်းသော အကုသိုလ်တရားတို့ကို ကုသိုလ်တရားဖြင့် အောင်နိုင်ခြင်း၊
Photographic Evidence of The Trail of Death and De...
Altantuya murder appeal put off again - at last mi...
[HEBAT] Dia Berjalan Kaki 5,700km Untuk Tunaikan H...
The Wonderful World of Puns
Gosh..Not funny okay..
Motorsikal Tersangkut Di Bumbung, Cerita P.Ramlee ...
Animal Welfare More Important Than "Tourism"
My New Kad OKU (Card for Person with Disabilities)...
Blind And Parkinson's Events Today
Holy cow Shahrizat not embarassed, blames media
How To Capture A Video Using A Nokia Handphone..
i miss you. mr. policeman.
Media Statement : Minimum Wage
[PANAS] Najib Malu, Video Hangout Terpaksa Di"priv...
Home Ministry lost to Mkini